China Securities Regulatory Commission ၏ဒုတိယ ဥက္က chairman ္ဌ ဟောင်း Cha Xiuli အား Ant Group ၏ လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ အဖြစ်ခန့်အပ် ခဲ့သည် – Pandaily
Laura Cha (Source: HKEx)
China Securities Regulatory Commission ၏ဒုတိယ ဥက္က chairman ္ဌ ဟောင်း Cha Xiuli အား Ant Group ၏ လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ အဖြစ်ခန့်အပ် ခဲ့သည်
Jun 02, 2022, 21:41ညနေ 2022/06/02 23:09:07 Pandaily
Alibaba ၏ဘဏ္ technology ာရေး နည်းပညာ ဌာန Ant Group သည် တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် ကို အဆင့်မြှင့် သည်ကြာသပတေး နေ့တွင် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ နှစ် ဦး ဖြစ်သော Chalaura နှင့် Yang Xiaolei တို့ ကိုပြသ မည်ဖြစ်သည်။ Hu Zuliu သည် ကုမ္ပဏီ၏ လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ ရာထူးကို ဆက် လက်မ ထမ်းဆောင် တော့ပါ။ ဘုတ် အဖွဲ့တွင် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ များ၏ အချိုးမှာ ၅၀% အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး အမျိုးသမီး ဒါရိုက်တာ များ၏ အချိုးမှာ သုံးပုံတစ်ပုံ ကျော်ရှိသည်။ ထို့အပြင် Jiang Fang သည် Ant Group ၏ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့တွင် မရှိတော့ သော်လည်း အစု ရှယ်ယာရှင် များ ကိုယ်စား ဒါရိုက်တာ အရေအတွက်ကို ၃ မှ ၂ အထိ လျှော့ချခဲ့သည်။
အများပြည်သူဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် များအရ Cha Shuyi သည်လက်ရှိ တွင်ဟောင်ကောင် Exchanges and Clearing Limited ၏ဥက္က chairman ္ဌ ဖြစ်ပြီး ဟောင်ကောင် အစိုးရ၏ အလုပ်အမှုဆောင် ကောင်စီဝင် ဖြစ်သည်။ သူမသည် China Securities Regulatory Commission ၏အ ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကောင်စီ၏ ဒု ဥက္က chairman ္ဌ နှင့် ကမ္ဘာ့ လဲလှယ် ရေး အဖွဲ့ချုပ် ၏ဒါရိုက်တာ လည်းဖြစ်သည်။ သူမသည် Unilever Limited ၏အမှုဆောင် မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သည်။ ဆွီဒင် AB Foundation Asset Management ၏အကြီး တန်း နိုင်ငံတကာ အတိုင်ပင်ခံ နှင့် Sotheby ‘s International Advisory Board အဖွဲ့ဝင် ။
Yang Xiaolei သည် Hengfeng ဘဏ် ၏ လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ၏အကြီးဆုံး နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေး အုပ်စု CITIC Group ၏ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီ တွင် ရှေ့နေ အဖြစ် လုပ် ကို င်ခဲ့သည်။ သူမသည် King & Wood Mallesons နှင့် Jingtai & Gongcheng Law Firm တို့၏ ရှေ့နေ နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် Primavera Capital Group ကို တည်ထောင်သူ Hu Zuliu သည် Ant Group ၏ လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ အဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင် ခြင်းမရှိ တော့ပါ။ Ant Group ၏ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့တွင် အကြီးတန်း CTO နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ Ant Group ၏နည်းပညာ အရာရှိ ချုပ် Ni Xingjun နှင့် Alibaba Group Holdings Co., Ltd. ၏နည်းပညာ အရာရှိ ချုပ် Li Cheng ။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Ant Group သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ယွမ် ၁. ၈၈ ဘီလီယံကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်
လက်ရှိတွင် Ant Group ၏ လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ လေး ဦး တွင် လူသိများသော စီးပွားရေးပညာ ရှ င်၊ အကြီးတန်း ဘဏ္ expert ာရေး ကျွမ်းကျင် သူ၊ အကြီးတန်း ဥပဒေရေးရာ ကျွမ်းကျင် သူနှင့် နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်း အတွေ့အကြုံ ရှိ သူတစ် ဦး တို့ပါဝင်သည်။ ဤ ပေါင်းစပ်မှု သည် ဘုတ်အဖွဲ့၏ ကျွမ်းကျင်မှု ကို သေချာစေရန် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်များ၏ ၅၀% သည် အမှီအခို ကင်း သည်။ ၎င်းသည် ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ ၏တာ ၀ န်များကို ထမ်းဆောင် ရန်လည်း အထောက်အကူပြုသည်။ ၎င်းသည် Ant Group ၏ ရေရှည် ကျန်းမာ ။ တည်ငြိမ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြု သင့်သည်။
အနာဂတ် ဘဏ္ control ာရေး ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ကြီးကြပ် မှု၏ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း နိုင်ရန်အတွက် Ant Group သည် ကော်ပိုရိတ် အုပ်ချုပ်မှု တိုးတက်စေ ရန်နည်းလမ်း အမျိုးမျိုး ကိုကျင့်သုံး ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင် ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ ၏အခန်းကဏ္ strengthening ကို အားဖြည့် ပေးခြင်း၊ ဒါရိုက်တာ များ၏စွမ်းဆောင်ရည် ကိုတိုးချဲ့ ခြင်း၊ အကျိုးစီးပွား ပ conflicts ိပက္ခ များ၊ စွန့်စားမှု စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး ၊။ အနာဂတ်တွင် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ အရေအတွက် ထပ်မံ တိုးပွားလာပြီး ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့တွင် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ များ၏ ထက်ဝက် ကျော် သည်တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်း သွားလိမ့်မည်။
Tags Alibaba∗ | ant group | financial technology
Ant Group သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ယွမ် ၁. ၈၈ ဘီလီယံကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်
တရုတ် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီး ပိုင် ဘဏ္ company ာရေး ကုမ္ပဏီ Ant Groupအလီ ဘာ ဘာဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် ၄ င်း၏ "ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၁" ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီး ESG ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးရေး မဟာ ဗျူ ဟာကို တရားဝင် စတင်ခဲ့သည်။
ကဏ္ဍ ခွဲမထား Jun 01 ဇွန် 1, 2022
Ant Group က စင်ကာပူ မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဘဏ် ANEXT စတင်
အစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင် သည့် ANEXT ဘဏ်အလီ ဘာ ဘာ-ပိုုင္ ပိုုင္ ပိုုင္ ပိုုင္ ပိုုင္ ပိုုင္ ဆိုုင္ တဲ့ ေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈ
Credit: Juffles Thailand Duty Group CEO
သောကြာနေ့ ညနေပိုင်းက ပြည်တွင်းမီဒီယာတစ်ခုမှာ 36kr message တစ်ခုရရှိပြီးနောက် ပြည်တွင်းကပုရွက်ဆိတ်များအဖွဲ့ စီအီးအို Ju Xiao Ming ဟာ သူ့ကုမ္မဏီကနေ ရာထူးမှနှုတ်ထွက်တော့မယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
Industry May 31 မေ 31, 2021